Ihe ntanetị nke Web Web na Ngwá Ọrụ Grabzit - Ndụmọdụ Semalt
Ndị ntanetị weebụ ntanetị bụ ezigbo ụzọ iji nakọta ozi na data na dozie ya na usoro eji eme ihe. Site na ngwá ọrụ ntanetị weebụ kwesịrị ekwesị, ọ dịịrị anyị mfe ịnakọta data, jikọta ya na ọdụ data ọhụrụ ma ọ bụ dị, wee jiri ya mee ka azụmahịa gị na-eto eto. Obi abụọ adịghị ya na ụzọ kachasị mma iji wepụ data site na ibe weebụ ma ọ bụ PDF bụ iji iji Toolbar Nchọpụta Web GrabzIt!
Ụdị data ma ọ bụ ozi dị aṅaa ka a ga-efopụ?
Nke a dị oke ntanetị weebụ nwere ike iwepụ data site n'akụkụ ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ. Ma ọ bụ peeji nke ọdịnaya, faịlụ HTML, ihe ndị dị ka oge na div, àgwà HTML, àgwà ederede na PDF ma ọ bụ onyinyo, ị nwere ike wepụ ya ozugbo na-eji usoro Grabzit.
Olee otú ọrụ weebụ a na-ekpochapụ akwụkwọ weebụ?
Weebụ Weebụ na-ahapụ anyị pịa bọtịnụ na njikọ nke ụdị mpempe akwụkwọ, họrọ nhọrọ nke saịtị ma rụọ ọrụ ndị ọzọ yiri ya. Ọ na-enye ohere ịnweta saịtị dịka ndị ọrụ nkịtị. Ozugbo ị họpụtara ihe ndị ahụ, ụfọdụ Web Scrapers nwere ike ịjụ gị ka ịmepụta okwu ọsịsọ dị iche iche mgbe niile ka ha wee wepụ ma wepụ data gị n'enweghị nsogbu. I nwekwara ike ime ka mmemme Grabzit mepụta okwu mgbe niile na nyocha ma kpochapụ ọtụtụ faịlụ dịka ịchọrọ.
Data gị ga-enwe ike ịnweta na ụdị dị iche iche dị ka Excel, XML, JSON, CSV, SQL na HTML na ị ga-enwe ike iji ya maka ma ọ bụ SQL ma ọ bụ MySQL sava. I nwekwara ike iji nzaghachi oku oku laghachiri na-enye gi ohere iji API ma megharia usoro dum ogwu. Nke a Web Scraper na-abịa na nnukwu ma dị ịrịba ama Ọkachamara n'ịntanetị na-akpaghị aka na-emepụta ntuziaka ndị nwere ike inyere aka ịmata ọdịnaya maka ihe mkpofu. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ka ịhọrọ ọdịnaya ịchọrọ ịchọrọ aka.
Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-echekwa otu ọdịnaya ahụ na ọtụtụ peeji nke, n'ihi ya, ị ga-eji Weebụ Web Grabzit iji kwụsị data niile n'otu oge. Ngwá ọrụ a na-achọgharị na-akpaghị aka na ọdịnaya dabara na ntụpọ gị, chọta na ịhazi URL site na weebụ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịkọwapụta kpọmkwem ibe weebụ ma ọ bụ URL ịchọrọ ịchọta ma ọ bụ zipụta kpọmkwem ihe ndị dị na ndepụta nke blog ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ ka a tụgharịa. Ọ bụ naanị ngwá ọrụ na-enye ohere ịnweta data n'ịntanetị na-enweghị ọnụahịa, nke pụtara na ị nwere ike iji usoro a n'enweghị akwụ ụgwọ penny Source .